स्वास्थ्य Archives - Nepalgunj Business
जिवित बच्चालाई मृत घोषणा गरेपछि…….
नेपालगञ्ज -२३ हप्ताको गर्भवतीले जन्माएको जिवित शिशुलाई भेरी अञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले मृत भन्दै गाड्न पठाए । परिवाजनले गाड्न लैजादा बच्चा जिवित पाइएपछि पुन उपचारका लागि अस्पताल फर्काइएको छ । घटना शुक्रवारको हो । सुत्केरी ब्यथा लागेपछि भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना भएकी जाजरकोटकी कमला अधिकारीको शुक्रबार बिहानै करीब ५ बजे सामान्य …
होलील्याण्ड स्कुलमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना
ममला होम केयरले नेपालगञ्ज, सुर्खेतरोडस्थित होलील्याण्ड उच्च माध्यामिक बिद्यालयमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ । बिद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाकाका लागि दन्त र आँखा रोग उपचारका लागि शिविरको आयोजना गरिएको प्रिन्सिपल प्रशान्त श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
डुडुवा गाउँपालिकाले डेगों नियन्त्रण गर्न औषधी छर्ने अभियान सञ्चालन
बांकेको डुडुवा गाउँपालिकाले डेगौं नियन्त्रणका लाई औषधि छर्ने कार्यको शुरूवात गरेको छ । गाउँपलिकाले होलिया,हिरमिनिया, कम्दी ५ र कम्दी ४ मा औषधि छर्ने काम सकिएको जनाएको छ भने बांके ठाउँमा छिटै सक्ने तयारी गरेको छ ।
सुर्खेत – गुर्भाकोट नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले हालै मात्र वार्षिक प्रगति समिक्षा गरेको छ । भाद्र १० गते नगर प्रमुख हस्त पुनले उद्घाटन गरेको समिक्षा कार्यक्रम उप–प्रमुख मैना बिकले समापन गरेकी थिइन । समिक्षा कार्यक्रममा कार्यक्रमहरुको उपलब्धि सहित कार्यक्रम सन्चालनमा देखिएका चुनौतिहरु र समाधानका लागि व्यापक छलफल पछि योजना समेत तयार …
प्रदेश लिग फूटबल प्रतियोगितामा धम्बोझी क्लब बिजयी, ५ लाख पुरस्कार पायो
नेपालगन्ज,भदौ १२ । प्रदेश नम्बर ५ मुख्य मन्त्री कप प्रदेश लिग फूटबल प्रतियोगितामा बाँकेको धम्बोझी क्लब १३ अङ्क सहित लिग बिजेता भएको छ । आज बिहिवार अन्तिम खेलमा दाङलाई ३-२ गोल अन्तरले बाँकेले उपाधी जितेको हो । प्रतियोगितामा बाँके ,बर्दिया ,रोल्पा ,दाङ ,रुपन्देही र नवलपरासी गरि छ जिल्ला सहभागी थिए …
बाँकेमा पनि देखियो डैंगु
काठमाडौं-देशभर डेंगुको प्रकोप फैलिएको छ। तीन महिना अघि देखिएको डेंगुले अहिले महामारीको रुप लिएको छ। तर कीटजन्य रोग डेंगु नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। बाँके जिल्लामा पनि यो रोगको प्रकोप देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतको इपिडिमियोलोजीले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, बाँकेमा दुई जना डेंगोका बिरामी देखिएका छन् । देशका …
समाज सुधारमा सक्रिय नेपालगञ्जका महिलाबाट अमेरिकी राजदूत प्रभावित, यस्तो भने ?
नेपालगञ्ज – अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले कृषी र स्वास्थ्य क्षेत्रको परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाएको भन्दै नेपालगञ्जकी एक २५ वर्षिया महिलाको प्रशंसा गरेका छन् । घरभित्र र वाहिरका कयौं अवरोध चिर्दै समाज परिवर्तनमा खेलेको भूमिकाबाट आफु प्रभावित भएको राजदूत बेरीले बताए । अमेरिकी राजदूतको रुपमा बेरीले झन्डै एक बर्षको आफ्नो नेपाल …
बाँके ट्रक यातायात प्रालि र लखनउको अस्पतालबीच सम्झौता, यस्ता सुविधा पाउने
नेपालगञ्ज – दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि बाँके ट्रक यातायात सेवा प्रालिले भारतको लखनउस्थित सुषमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरसंग लिखित सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा समितिका अध्यक्ष महेन्द्र मल्ल र रिसर्च सेन्टरका तर्फबाट मनीषकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे । अबदेखि बाँके ट्रक यातायात सेवा प्रालि अन्र्तगतका ट्रकबाट हुने दुर्घटनाका घाइतेको उपचारको …
नेपालगञ्ज -समायोजनमा परेर चिकित्सकको अन्यत्र सरुवा र बजेट नआएका कारण दुई वर्ष अघि नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा शुरु भएको मुटुरोगको उपचार सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ उक्त उपचार सेवा शुरु भएपछि मुटुरोगीका लागि बरदान सावित भएको छ । लखनउ र काठमाण्डौ जानुपर्ने बाध्यता हटेको थियो । तर अस्पतालमा …
तीन दर्जन नयाँ औषधी उद्योग आउँदै, नेपालगञ्जमा कुन ?
नेपालगञ्ज -स्वदेशी बजारमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीसहित तीन दर्जन नयाँ औषधी उद्योग थपिँदैछ । पूराना उद्योगले पनि थप लगानी गर्दै नयाँ उत्पादन इकाइ थप्ने र उत्पादनमा विविधता ल्याउने काम जारी राखेका छन् । नेपालगञ्जमा पनि ठुलो औषधी उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । उद्योगको संख्या थपिएसँगै …